News – Page2– Maharmedianews
တော်တော်လေးစိတ်အေးရပါပြီ….တရုတ်ငှက်ပျောကားတွေ ရာနဲ့ချီဝင်ထွက်နေတဲ့ ဥမင်လှိုင်ခေါင်းကို ပိတ်လိုက်ပါပြီ
NLD ကို ထောက်ခံတာ၊ ၀န်ထမ်းဖြစ်နေတာနဲ့ပဲ အဆီအငေါ်မတည့်တဲ့ အမိန့်တွေကို ငြိမ်ပြီး နာခံရတော့မှာလားလို့ မေးခွန်းထုတ်လိုက်တဲ့ ဆရာမ
မြို့ ကို ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကြားကနေ လူဦးရေ (၅) သန်းကျော် ထွက်ခွာလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့ ၀ူဟန်မြို့တော်ဝန် ၀န်ခံ
“၀ူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ဟာ လူချင်းထိရုံနဲ့ လူ(၁)ယောက်ကနေ (၁၄)ယောက်ထိ ကူးစက်နိုင်တယ်”လို့ သူနာပြုကပြောအပြီးမှာ တရုတ်သမ္မတ ကအရေးပေါ် အမိန့်ထုတ်ပြန်
January 26, 2020 admin555
တရုတျပွညျသူ့သမ်မတ Xi Jinping သညျ တရုတျပွညျသူ့သမ်မတနိုငျငံ၏ ဥပဒနှေငျ့အညီ Coronavirus ဗိုငျးရပျဈပိုး ရပျတနျ့ကာကှယျတားဆီးနိုငျရေးဆိုငျရာစညျးမဉျြးဥပဒကေိုအရေးပျေါထုတျပွနျလိုကျပွီး ခြိုးဖောကျသူမြားအားလုံးကို အထူးအမိနျ့ဖွငျ့အမွငျ့ဆုံးပွဈမှုပွဌာနျးရနျအတှကျ စဈတပျမှအရာရှိမြား ရဲတပျဖှဲ့မြားအားအရေးပျေါအထူးအမိနျ့အာဏာကိုထုတျပွနျလိုကျပါတယျ ။ ဝူဟနျမွို့ဆေးရုံတှငျ ရောဂါပိုးကူးစကျခံရသူ အမြိုးသမီးလူနာတဈဦးသညျ မကွာခငျသူသဆေုံးရတော့မညျဟုတှေးထငျကာစိတျဖောကျပွနျပွီး သူခန်ဓာကိုယျမှဆေးပိုကျမြား ၊
ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ အဖွဲ့လိုက်သွားရောက်လည်ပတ်ရင်း (၆) တန်းကျောင်းသူကို အုပ်စုဖွဲ့ သားမယားပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား
တနိုင်း၊ ဇန်နဝါရီ၂၆ ကချင်ပြည်နယ်၊ တနိုင်းမြို့၊ လမုန်ကျးရွာတွင် ဇန်နဝါရီ၂၀ရက်နေ့၊ နေ့လည်ပိုင်းအချိန်က ကျောင်းသူတစ်ဦးကို ကျောင်းသားအုပ်စုလိုက်က သားမယားပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း တနိုင်းမြို့မရဲစခန်းမှသိရသည်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားသည့်နေ့တွင် လမုန်ေ ကျး ရွာ စာသင်ကျောင်း၌ ကျောင်းစုံညီပွဲတော် ကျင်းပပြုလုပ်ရန်အတွက် ဆရာ/ဆရာမများက
၀ူဟန်ဆေးရုံမှာ သေဆုံးခဲ့တဲ့ ဆရာဝန် ဒေါက်တာလိယန်ဝူးတုန်
ဝူဟနျဆေးရုံတှငျ ဆရာဝနျတဈဦးသဆေုံးခွငျးသညျ Corona Virus ပိုးကူးစကျခွငျးနှငျ့မသကျဆိုငျဟု Chaina Daily သတငျးကထုတျပွနျခဲ့ပါတယ် ပွီးခဲ့တဲ့ဇနျနဝါရီလ ၁၆ ရကျနကေ့တရုတျနိုငျငံ ဟူပှပွေညျနယျ ဝူဟနျမွို့မှအသကျ ၆၂ အရှယျ နားနားခေါငျးလညျခြောငျးအထူးကု ( အငွိမျးစား ) Dr.
NLD ပါတီမှ ထုတ်ပယ်ခံရတာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး “အလွန်ပင် အံ့သြရပါသည်” ဆိုပြီး ရင်ဖွင့်လာတဲ့ လွှတ်တော်အမတ် ဦးကျော်ဇေယျ
အားလုံး မဂျလာ ပါ ခငျဗြာ ပထမဦးဆုံးအနဖွေငျ့ ကြှနျတျောကြျောဇယေအြား ပါတီကိုကွညျ့ပွီး မဲပေးလိုကျကွသော ဒဂုံ-(2)မှ မဲဆန်ဒရှငျ ပွညျသူမြားအားလညျးကောငျး၊ဒုတိယ အနဖွေငျ့ ကြှနျတျော့အား ပါတီ အတှငျးမှ နှေးထှေးစှာကွိုဆိုခဲ့ပါသောနာယကကွီးဦးတငျဦး၊ဒဂုံမွို့နယျ (nld)ပါတီမှ ကှယျလှနျသှားရှာပွီ ဖွဈသောဥက်ကဋ်ဌဦးစောလှိုငျ၊ဒုဥက်ကဌ ဦးသိနျးဦး
“၀ူဟန်ဗိုက်ရပ်စ် ကူးစက်ခံရသူ ၁၂၃၀ ဦး အထိရှိလာပြီး သေဆုံးသူ ၄၁ ဦးထိရှိလာ၊ ၀ူဟန်မြို့ လက်ရှိအခြေအနေ(ရုပ်သံ)
January 25, 2020 January 25, 2020 admin555
ဝူဟနျ virus ကူးစကျရောဂါသညျ ၁၂၃၀ဦးအထိဖွဈလာပွီး သဆေုံးသူ ဦးရေ ၄၁ ဦးထိဖွဈလာသညျဟုသိရှိရပါတယျ။ ကမ်ဘာတဝှမျးပြံနှံ့ကူးစကျခံရသူ ၈၀၀ဦးအထိရှိလာနပွေီဖွဈပါတယျ။ တရုတျအစိုးရတပျမြားက ရောဂါစတငျဖွဈပှားရာ ဝူဟနျမွို့အပါ ဝငျ ဟူဘေးပွညျနယျက မွို့ကွီး ၉မွို့ကို အကူးအသနျး အဝငျအထှကျမရှိအောငျ ပိတျဆို့ထားလိုကျပါပွီ။
မူလတန်းပြ ဆရာမလေး တစ်ယောက်က ဘာအပြစ်တွေလုပ်မိလို့ ခုလို ရက်စက်ရတာလဲဗျာ…
January 25, 2020 admin555
မနေ့ ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက် ည ၇ နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် အင်မိန်းဟိုကျန့်ကျေးရွာအုပ်စု ဟွေခုတ်ကျေးရွာမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ မူလတန်းပြကျောင်းဆရာမဖြစ်သူ လွေးမြမွှေးအောင်(အသက် ၂၆ နှစ်)ကို လူတစ်ဦးက သေနတ်နဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ သေနတ်ပစ်သူဟာ
“ငွေဆိုတာ လူတိုင်းရဲ့ သည်းခြေကြိုက်”လို့ ပြောကြတဲ့စကားက သူ့အတွက်တော့ မမှန်ခဲ့ပါဘူး
(၂၄.၁.၂၀၂၀) သောကြာနေ့ ဒီနေ့ ပုဂံမြို့မြို့လယ် အောင်ချမ်းသာရှစ်မျက်နာဘုရား ဓမ္မာရုံတောင်ဘက် ညနေ ၃နာရီ၃၀ မိနှစ် အချိန် တွင် ညောင်ဦးခရိုင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန ရုံးဝန်ထမ်း ဖြစ်သူ # ဒေါ်ခင်ဇာလင်း # မှ
အမူးလွန်နေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦး ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကပြုတ်ကျ၊ အတူလာသူက လမ်းမှာ ပစ်ထားခဲ့
မော်လမြိုင် ကမ်းနားလမ်းတွင် ကောင်မလေးတစ်ဦး အမူးလွန်ပြီး ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှပြုတ်ကျ. အဖော်ဖြစ်သူမှ ပစ်ထားပြီး လစ်သွား 24.1.2020 ည(9:00)ခန့်က မော်လမြိုင်မြို့ ကမ်းနားလမ်းမြသံလွင်ရှေ့တွင် အမျိုးသမီး(၂)ဦး စီးလာသော ဆိုင်ကယ်ပေါ်မှနောက်တွင် ထိုင်လိုက်လာသော ကောင်မလေးမှာ အမူးလွန်ကာဆိုင်ကယ်ပေါ်မှ ပြုတ်ကျမှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ကားဆရာရေ. . . ခင်ဗျားတိုက်ပြီး ပစ်ထားခဲ့တဲ့ မိသားစုကတော့ ကမ္ဘာပျက်နေပြီဗျာ. . .
January 24, 2020 January 24, 2020 admin555
19-1-2020 ရဲ့ကြှနျမဘဝရဲ့ငရဲကခြွငျး~~ ကြှနျမအမြိုးသား ကိုသားကွီး 19-1-2020(sunday)ည10-15PM လောကျမှာကြှနျမရှိတဲ့နဝဒေးဥယြာဉျအိမျယာကိုမွို့ထဲမှာမုနျ့အတူသှားစားဖို့ ကြှနျမတူလေးကိုဆိုငျကယျနဲ့မောငျးပို့ခိုငျးပါတယျ~ BOCမှတျတိုငျအလှနျတိုးခြဲ့မှတျတိုငျအရောကျမှာဓာတျဆီပကျြသှားလို့tarminel ဓါတျဆီဆိုငျကိုတူရီး2ယောကျလမျးအလယျပလကျဖောငျးကကပျပွီးတှနျးသှားနတေုနျးနောကျကနေ CC -Texi ဖငျကောကျအဖွူရောငျတဈစီးကအရကျမူးလာပွီး အနောကျကနတေိုကျလိုကျတာကြှနျမအမြိုးသားရော ဆိုငျကယျရောလှငျ့ပွီးတဈဖကျလမျးမပျေါကိုအရှိနျနဲ့ပွုတျကပြွီးဦးခေါငျးအုတျစကျပှငျ့ ဘယျဘကျနံရိုးကြိုးခွသေပှတျတိုငျလယျပွီးအဲ့နရောမှာတငျပှဲခငျြးပွီး ပါ~ အဲ့တိုကျသှားတဲ့ကားက 19 ရကျကတိုကျထှကျပွေးပွီး20ရကျနထေိ့ဘာသဲလှနျစမှမရသေးပါဘူး ~အဲ့နားကမှောငျမဲပွီးဘာမှမမွငျရတာရယျ
ဆိုင်ကယ်အိတ်ဇောဖြုတ်ပြီး အသံဆူညံစွာ မောင်းနေသူကို ပြင်းထန်သည့် ထောင်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်သည့် ပုဒ်မဖြင့် ဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်
January 24, 2020 admin555
အသံကျယ် အိပ်ဇော စီးသူအားပြင်းထန်သည့် ထောင်ဒဏ်ပါသော ဥပဒေဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူပြီ ပေါင် ဇန္နဝါရီ ၂၃ ပြည်သူအများကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန်တမင်ရည်ရွယ်ပြီးလူငယ်အချို့မှ ဆိုင်ကယ်အိပ်ဇောဖြုတ်စီးနင်းခြင်းအသံကျယ်အောင်ပြုလုပ်မောင်းနှင်နေခြင်းများကို ရဲတပ်ဖွဲ့က အရေးယူမှုစတင်နေပြီဖြစ်သည် ဇန္နဝါရီ ၂၂ရက်ည ၁၁နာရီအချိန်ခန့်တွင် ပေါင်မြို့ကဒုံစီးရပ်ကွက် ဘီးခွန်ဂိတ်တွင် ပိတ်ဆုံ့ရှာဖွေရေးတာဝန်ကျ ဒုရဲအုပ်ယင်းမာတိုးနှင့်အဖွဲ့က